လေနုအေး: မြူမှောင်ဝေကင်း သင်္ကြန်တွင်းဝယ်…
Posted by တန်ခူး at 8:43 PM
အမတန်ခူးကို ရေလောင်းသွားပါတယ်။ သားသားနဲ့ အကိုကြီးကိုလည်း အဆစ်ထည့်လောင်းခဲ့တယ်။
ပျော်တဲ့ သင်္ကြန်ပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် အမရယ် ... ပျက်တဲ့ သင်္ကြန် မဖြစ်စေချင်ပါဘူး ... ။
မြူမှောင်ဝေကင်း သီချင်းစာသားကို အမရေးမှ သေချာ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး သိပ်ကောင်းတာပဲ ... ။
အမတန်ခူးတို့ မိသားစုလေး နှစ်သစ်မင်္ဂလာ သင်္ကြန်အခါမှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ အမရေ ... ။
i agree, ama.
i am always shameful in there they destroy our traditional.
it is more and more seriously worseayear by year.